Myanmar: Sary Avy Amin’ilay Faharavana Nentin’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2011 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 简体中文, 繁體中文, Shqip, srpski, Português, বাংলা, Italiano, Aymara, македонски, English
Horohorontany iray nanana hery 6.8 no namely ny ilany avaratra-atsinanan'i Myanmar ny harivan'ny Alakamisy 24 Martsa 2011, izay re hatrany akaikin'i sisintanin'i Thailand ary hatrany Vietnam sy Shina lavitra any mihitsy aza. Ilay fihetsehana dia namoizana aina 70 ary nandrava trano maherin'ny 240 tao Myanmar fotsiny. Nisy fihetsehana mahery vaika voamarika koa tany an-tanànan'i Chiang Mai sy Chiang Rai any Thailand.
Mety mbola havesatra aza ny isan'ny olona tra-doza. Araka ny tatitra, maherin'ny vatam-paty 80 no lafo tao Tachilek ny marainan'ny Zoma 25 Martsa. Ireo mpanaramaso dia namaritra ilay horohorontany ho ny fahatelo goavana indrindra tamin'ny resaka voina voajanahary nahazo an'i Burma taorian'ny rivodoza Nargis tamin'ny 2008 sy ny rivodoza Giri tamin'ny 2010.
Ny gazety tsy miankina The Irrawaddy dia nitafatafa tamin'ireo mponina ao Mae Sai any Thailand. Tanatin'ny taratasy nalefany navoakan'ny Shan Herald, Jai Noi dia nitantara ny fiantraikan'ilay horohorontany tamin'ireo mponina
Ny bilaogy akm-kuntha dia nampakatra sary maneho ny fahavoazan'ny lalambe Tarle, tanana any amin'ny 20 miles miala an'i Tarchileik.
Democratic Voice of Burma koa dia nampakatra sary avy amin'ilay horohorontany. Indreto misy fanehoankevitra vitsivtsy tao amin'ny twitter avy any Yangon
@ascmmr: Ry mpanaraka malala, antenainay fa tsara tsy misy tohina ianareo noho iny horohorontany iny. Raha naheno ny horohorontany ianareo ny 24 Martsa 2011 teo, tamin'ny 8 ora 25 mn alina
@minnyoonthit: ilay horohorontany dia niteraka faharavana goavam-be tao Avaratr'i Shan, faritr'i Tachileik (manodidina ny 100 ny olona maty, marobe ireo olona naratra.
@blacksumo: Letyyyyyye tena mariba ve ilay horohorontany e? Noheveriko fa nanao sangy ratsy ny nenitoako?? …